Indawo yokusebenzela yakwaProdcut - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
I-Jera fiber inemihlangano emi-3 kumasifundisane womhlangano. Iningi lemikhiqizo esiyikhiqizayo inezingxenye zokungcebeleka ezi-4 noma ngaphezulu. Umkhiqizo ophelile udinga ukuhlanganiswa kulayini wokukhiqiza, bese wenza ukupakisha. Sisebenzisa ubuchwepheshe bohlelo lokuhambisa ukusheshisa ukusebenza kahle komhlangano wethu
Emhlanganweni wokuhlangana sihlangana:
-FTTH ibhokisi FTTH Splice Ukuvalwa
-FTTH ikhebula lokumisa nokumiswa kocingo
-drop wire ngocingo
-Electrical ikhebula ihange ngocingo
-Low voltage ikhebula ukumiswa ngocingo
Isixhumi sokubhoboza ukuvalwa
-Ishear head cable lugs and connectors
Sinezinyathelo ezi-7 ezibheke kulayini wenhlangano osebenzayo:
Ukuhlelwa kwenqubo yenkundla yokusebenzela
Sula ukwahlukaniswa komsebenzi womhlangano
Thumela umhlangano wokusebenzela
Beka ukuhlangana ekusebenzeni
Ingxoxo yezindlela zokuthuthuka ezijwayelekile
Ukwakhiwa kwesimo esidingekayo
I-Jera fiber isebenzisa uhlelo lokuhambisa lapho sihlanganisa izimpahla. Lolu hlelo lungathuthukisa ukusebenza kahle komkhiqizo futhi longe izindleko zokukhiqiza zasefektri. Futhi kungonga inani labasebenzi bokukhiqiza ngezinga elithile futhi kufinyelele ezingeni elithile lokukhiqizwa okuzenzakalelayo.
Inhloso yethu ukukhiqiza nokunikezela ngemikhiqizo ephelele futhi enokwethenjelwa kumakhasimende ethu ekwakheni inethiwekhi yezokuxhumana kanye nezinhlelo zokusabalalisa amandla. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ngokubambisana okuqhubekayo, ngethemba ukuthi singakha ubudlelwano obunokwethenjelwa, besikhathi eside.